Isinaphi sesifo sikashukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Imbewu yesinaphi yesifo sikashukela, indlela yokuthatha kanye ne-contraindication
Lezi zindaba zingashaqisa, kepha ukudla ushukela wesinaphi akukhona nje kuphela, kodwa futhi kuyadingeka. Isifo sikashukela i-mellitus bekulokhu kuyisifo esiyingozi esingalapheki.
Kuliqiniso, umuthi wanamuhla awufani nakwiminyaka eyikhulu edlule, futhi abanesifo sikashukela bangaphila lolo suku bezizwa njengabantu abagcwele. Manje kungokwangempela, futhi umsebenzi ojwayelekile, ezemidlalo ejwayelekile, ukuzilibazisa okusebenzayo, umndeni ogcwele nokuningi kuyatholakala kubantu abatholakala nesifo sikashukela.
Isimo sehlukile ngokudla. Akunandaba noma "isigwebo" sezokwelapha, abantu bayaqhubeka nokufisa okumnandi, okunamafutha noma okubabayo.
Konke lokhu kuyenqatshelwe noma kuvunyelwe ngamanani amancane. Ngembewu yesinaphi, izinto ziyehlukile. Ochwepheshe emkhakheni we-homeopathy bathi ukusebenzisa njalo imbewu yezitshalo kukhipha noshukela wegazi ezigulini.
I-mustard ayisebenzi hhayi esigabeni sokuqala sikashukela, kepha futhi esigabeni sesibili esiyinkimbinkimbi. Futhi izakhiwo zotshani zikule maphuzu alandelayo.
I-sawes ethuthukisiwe, ikhula ngokwesilinganiso ngezikhathi eziyi-8, ngokungafani nesikhathi isinaphi esifakiwe ekudleni. Ukudla okuhlafunwe embozwe ezintweni ze-enzymatic futhi kulula ukukugaya. Umzimba uthola izinto ezizuzisayo, futhi okusalile okuyingozi akunamphumela olimazayo.
Utshani bunomphumela wokulwa nokuvuvukala. Ikakhulu le mpahla iziveza esigabeni sokuqala sikashukela ngokuvuvukala kwe-autoimmune. Imbewu yesinaphi icindezela izinqubo ezingezinhle futhi yenze inkambiso yokugula okungathi sína.
Isenzo sohlobo lwe-antioxidant. Lesi sitshalo sicindezela ama-radicals amabi nge-athomu elilodwa lamahhala, elibhubhisa umngcele wolwelwesi lweseli, luvula indlela yezinto ezinobungozi emaseli. Inqubo efanayo yenzeka epithelium yamanyikwe, elibhekele ukwenziwa kwe-insulin, futhi lokhu kukhulisa isimo sesifo sikashukela.
Inomphumela oqondile ohlose ukungalingani nezinto ezinobuthi zeqembu elithile. Ngale ndlela, kwakhiwa uhlobo lwesithiyo esivikela oluvumela umzimba ukuba usebenze ngokwemvelo futhi ngaphandle kweziphambeko.
Ukuphuka kwe-lipid okuthuthukisiwe. Uma usebenzisa imbewu yesinaphi ngokudla kwansuku zonke kwamafutha, khona-ke inqubo esheshayo yokuqhekeka kwe-lipid iyenzeka emathunjini. Isidumbu sithola kuphela lezo zingxenye zokwakha ezingokwakha ukuvala “izikhala” kulwelwesi lweseli.
Ukulawulwa kwezinqubo ze-metabolism zamafutha nama-carbohydrate. Lapho kudliwa imbewu yesinaphi, izinga likashukela wegazi liyancipha, bese ikholesterolini ihlale ezindongeni zemithambo yegazi ngokuhamba kwesikhathi, ixubeke. Utshani obumnandi busebenza njengompi wokulwa ne-atherosclerosis, enobungane nesifo sikashukela ezigabeni zokuqala zokukhula kwayo.
Umphumela omncane omuhle wesinaphi emzimbeni wesifo sikashukela uvezwa kanjena:
utshani buyasiza ekwenzeni umkhiqizo we-bile,
yenza ukukhululeka kwe-bile emathunjini omuntu,
ithuthukisa izinqubo zokugaya ukudla,
isebenza njenge-prophylactic yokuqunjelwa futhi ibaphathe.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, kunoma yisiphi isigaba aqala ngaso, yonke imiphumela engenhla yotshwala lwesinaphi ineqhaza ekwenzeni isimo somuntu sisonke. Inhlala-kahle yesifo sikashukela iya ngokuya ithuthuka, futhi lesi sifo siyayeka ukuthuthuka ngezindlela eziningi eziyinkimbinkimbi.
U-mustard udlala indima yohlobo lwe-aperitif - umkhiqizo ovusa isifiso sokudla futhi ucasule ukunambitheka kokunambitha. Lapho usebenzisa imbewu ngezinjongo zokuvimbela nokwelashwa, kudingeka uqaphele futhi uqaphele izingxenye ezivame ukuzidla. Lokhu ukuphuma kwesikhashana kwendlala engalawulwa, okuzodlula ngokushesha lapho isisu sigcwaliswe ngenani lokudla elidingekayo, hhayi ngokweqile kwalo. Kufanele wenqabe imikhiqizo yesinkwa.
Isinongo ngokwaso sikashukela asichaziwe njengesidakamizwa esihlukaniswe ngaphandle. Njengesengezo sokudliwayo, idlala indima efanayo njengokujwayelekile - kuthuthukisa ukunambitheka kwezitsha, ingeza nokudla okubhaliwe. I-mustard powder ishintsha kakhulu ukunambitheka kwezitsha. Isobho esingenambithiko sikashukela sizoba iphunga elimnandi futhi lihle.
Imisipha yembewu yesinaphi izothokozisa noma ngubani. Isifo sikashukela, lwesinaphi singadliwa nganoma yiluphi uhlobo, kodwa ungasidli ngokweqile.
Umkhiqizo ngamunye wokudla, njenge-athomu, une-plus and minus. Lalela ukuthi bathini odokotela, bese ulalela kuqala umzimba.
Ukusetshenziswa kwansuku kwezinongo zezinongo kuvunyelwe ngaphakathi kwemikhawulo esungulwe ngodokotela abakhona.
Ama-diabetes anesifo sohlobo lwesibili adinga ukusetshenziswa njalo kwembewu yesinaphi, ngoba ngaphezu komphumela we-antimicrobial, nawo unomphumela we-antifungal. Abanesifo sikashukela bathola isisindo ngokweqile, futhi ukusonga kwesinaphi kusiza ukubhekana ngempumelelo nenkinga. Lolu hlu alupheli njenge-mustard:
isikhuthazi esisebenzayo sokugashelwa esiswini,
kuthuthukisa isifiso sokudla
inomthelela ekujwayekeni kwendlela yokugaya futhi ngokuzayo ivumela abanesifo sikashukela ukulawula ukusebenza kwayo,
kwehlisa ithoni yesibeletho.
Utshani busetshenziswa kwezemithi ukwenza amakhambi asebenza ngempumelelo. Imbewu inciphisa ukuqubuka kwesifo esimnandi ngenxa yezindawo zazo ezilwa nokuvuvukala. Isitshalo sisebenza njenge-laxative yemvelo ebucayi ehlanza amathumbu ezintweni ezinobungozi, futhi ingalimazi umzimba.
Isifo Sikashukela mustard
Ukuzuza umphumela wokubopha ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela, okungenani amagremu ayi-10 wesinaphi kufanele afakwe ekudleni kathathu ngosuku. Ukuze zonke izinto ezilandelwayo zingene egazini lomuntu ekuhlushweni okuphezulu, kunconywa ukuphuza izinongo nge-anyanisi ukumnika. Ukupheka kulula. Cola imifino bese uthele ama-200 ml wamanzi abandayo, ake ume amahora ama-2. Inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-14. Ngemuva kokudinga ukwenza ukuhlolwa kwegazi ushukela. Ezimweni eziningi, inhlala-kahle yabanesifo sikashukela iyathuthuka.
Ikhekhe lenziwa kusuka emaqabungeni amancane otshani, athathwa kuzipuni eziyi-1-3 ngosuku. Ukuze uthuthukise umphumela, udinga ukushintshanisa ukwamukela nekhekhe le-poplar noma yarrow. Ungawunaki umhlonyane: unezici ezifanayo.
I-mustard tea iyipanacea yesifo sikashukela. Thela isipuni sempuphu yesinaphi ku-thermos bese uthela ama-500 ml wamanzi ashisayo (hhayi amanzi abilayo). Ukuze itiye lisebenze, kufanele kudlule amahora amaningi. Udinga ukuyiphuza kumagremu ayi-100 imizuzu engama-30 ngemuva kokudla.
Utshani obumnandi bungumkhiqizo wokudla, ngakho-ke kufanele usetshenziswe njengokuthambisa izitsha. Ivuselela izinqubo zamanyikwe futhi ithuthukisa ukuqina kokudla.
Ngaphezu kwezakhiwo zayo eziningi ezizuzisayo, lesi sitshalo sinemiphumela emibi:
awukwazi ukudla izinongo zezifo ezithathelanayo zohlelo lwezinso,
ngemisipha ye-sphincter ebuthakathaka, ngoba ukushisa kwenhliziyo kungenzeka.
Ngokuqapha nangemithamo emincane, kufanele uthathe isinaphi ngesimo esiyinhlanganisela sikashukela sohlobo lokuqala nolwesibili ezimweni ezinjalo:
nge-hypertension ye-arterial, kufanelekile ukuphuza itiye, kepha ungahlafunisi okusanhlamvu okusha kwesitshalo, okuwumkhiqizo ogxile kakhulu,
lapho kwenzeka ukungezwani komzimba emzimbeni.
Odokotela batusa ukuqala imithamo ngemithamo emincane, kancane kancane bayikhulise. Uma kuvela izimpawu ezingezinhle, i-prophylaxis ingadalulwa ngokwanda komthamo.
Ukusetshenziswa kwembewu yezitshalo kufanele kwenzeke ngaphakathi kwemikhawulo efanelekile. Ngaphandle kwalokho, abanesifo sikashukela ngohlobo lwesifo sokuqala nolwesibili lwesifo bayothusa impilo yabo. Kungcono ukukhohlwa nge-powder. Khumbula: konke okusebenzisekayo okuthathwa ngokulinganisa. Imithamo efanele yemithi yemvelo izonciphisa izinkinga ezinokwenzeka futhi inikele enkambweni enhle yesifo.
Ungayithenga kuphi imbewu yesinaphi?
Imithi ye-Homeopathic enezinhlamvu zesinaphi noma umkhiqizo wokuqala ithengiswa ngokukhululekile emakhemisi amaningi. Kudingeka umuthi wokuthola amakhambi. Ungapheka isitshalo sokuphulukisa ngokwakho ekhaya, ngokususelwa ekuphekeni kwemithi yendabuko. Into esemqoka ukuthola izinkundla ezingumqondo noma amasayithi abhekiswe ngokuningiliziwe ngencazelo yeresiphi kanye nokupheka kwesinyathelo-ngesinyathelo.
Ukuzilapha kungaholela emiphumeleni engenakulungiswa. Kungcono ukuzinika isikhathi sokuvakashela udokotela oyisidambisilwazi ozokweluleka ukuthi imiphi imithi nokuthi imiphi inqubo okufanele ayithathe. Ukwehlisa okuzimele ushukela wegazi akukwazi nje ukuthuthukisa isimo, kepha futhi kubuye nesifo sikashukela emtholampilo.
Kuyafaneleka ukuthatha ukukhetha kwezimbewu zokupholisa ukwelashwa kwegazi ngokungathí sina. Ikakhulu uma uzothatha umuthi osuselwa lwesinaphi. Funda imiyalo, hlola ukufaneleka komuthi futhi uhlole ukuthembeka kwephakeji. Ukushona, ukuqhekeka, ukuguqulwa kwekhadibhodi - uphawu lokuthi okuqukethwe kungalimala.
Impilo yilokho esikuthola ngokuzalwa mahhala emvelweni. Ukuze uyilondoloze, lalela amasiginali womzimba nomuthi wokuthembela, ngoba sekufinyelele ezingeni elabhalwa eminyakeni engaba yikhulu eyedlule ezincwadini eziqanjiwe zesayensi.
Kwelinye lama-athikili ethu, sikhulume ngokwelashwa kwe-mellitus yesifo sikashukela ngamanzi aphilayo nabafileyo, manje sizokwabelana ngezindlela zokupheka ezisuselwa kwiziphunga, ezizophinde zibe nosizo olukhulu kulesi sifo.
Kunezindlela ezithile zokusebenzisa imbewu yesinaphi sikashukela. Isibonelo, ungadla i-3 tsp. imbewu nsuku zonke. Ngemuva kokwelashwa, hlola ukuhlolwa kwegazi, okuzokumangalisa ukumangalisa. Ngaphezu kwenhloso enkulu, izinongo zithuthukisa inqubo yokugaya futhi zilwe nokuqunjelwa.
Ungaphuca amahlamvu wesinaphi ngoketshezi oshisayo, ake umhluzi ume, bese uhlunga nge-cheesecloth. Nsuku zonke, sebenzisa 2 tbsp. noma uphuze i-decoction yenkomishi eyi-1/2 kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngemuva kokudla.
Itiye le-antidiabetic elidumile: thatha i-1 tsp. imbewu yesinaphi, i-endive ne-pepper yamanzi bese uthele u-0.5 l wamanzi ashisayo. Akuyeke. Phuza ingilazi kathathu ngosuku. Ungangeza futhi iSophora, i-chicory yaseRussia kanye nomhlonyane.
Amafutha ama-mustard namafutha okugcoba kulula ngisho nokuwasebenzisa, kumane nje kuxutshwa ezindaweni eziyinkinga.
Uhlu lokudla okungafanele ukudliwa yisifo sikashukela
Ukuze ungenzi kabi isimo sezempilo ngalesi sifo, kufanele wenqabe ukudla:
I-Ketchup enokugcwala okukhulu kwesitashi, okuthi emzimbeni kudilizwe kube ushukela. Ukudla i-ketchup ngamanani amakhulu kubangela ushukela wegazi ophezulu.
Imayonnaise ayinconywa kwabanesifo sikashukela, iyingozi ngenqwaba yamafutha ezilwane ngamafutha zemifino.
Ushizi wekhekhe isitashi esinongiwe samafutha ezilwane nawobuchwepheshe.
I-sausage ephekiwe kungukuchitha inyama kanye nomkhakha wokulungisa ukudla isibindi, isitashi, amafutha.
Amasoseji ababhemayo - ukuba khona kwamafutha kuzo kukhawulela ukusetshenziswa kwesifo sikashukela.
Ngingakwazi ukudla isinaphi kashukela? Kuthengwe isinaphi ezitsheni esitolo esikhulu ushukela nesitashi, okuzocasula ulwelwesi lwama-mucous lwesisu kanye nesistimu yamathumbu, kubangele ukuqina kwesilonda.
Kulula ukwenza isinaphi esidliwayo. Ukuze wenze lokhu, uthele i-mustard powder esitsheni sengilazi, uthele amanzi ashisayo, uvuse ukuze uthole ukuvumelana kokhilimu omuncu. Faka usawoti, upelepele omnyama ukunambitha, ushukela obambele, 1 tbsp. l uviniga nge-200 g ye-kex yesisindo.
Ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2, kunconywa ukuthi udle anyanisi abhakwe. Kungathathwa ngokuthi:
Izici eziwusizo zomkhiqizo ziyabonakala ngesikhathi sokubhaka kwayo. Kwishukela, anyanisi abhakwe anconyelwe ukusetshenziselwa ukulungisa ama-tinctures. Indlela yokulungiselela amakhambi abantu:
U-anyanisi oqoshiwe futhi wafakwa embizeni yengilazi. Inani elifanele liyi-2 litres.
Umkhiqizo olungiselelwe uthululwa ngamanzi abilisiwe abilisiwe.
Ithuluzi lifakwa usuku esiqandisini.
Ukumiliselwa okunjalo kunconywa ukuba kuthathwe kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Umthamo owodwa ka-70 ml. Isikhathi sokwelashwa siyizinsuku eziyi-17.
Kukhona nenketho ye-tincture ne-anyanisi ewayini elibomvu. Ilungiswa ngendlela efanayo naphezu kwamanzi, kusetshenziswa kuphela iwayini elibomvu elibomvu elisetshenziswa njengesisekelo se-liquid. Umuthi kufanele ufakwe esiqandisini izinsuku eziyishumi. Kufanele kuthathwe 1 tbsp. ngemuva kokudla. Kunconywa ukwenza isifundo se-1 sokwelashwa okunjalo ngonyaka.
Esikhathini sikashukela, imbewu emhlophe yesinaphi ingathathwa iphelele. Umthamo ofanele ngu-1 tsp. Ngomthelela omkhulu, kunconywa ukuwaphuza nge-anyanisi ukumnika. Izifundo zokwelapha zingahlala isonto kuye enyangeni.
Imbewu yesinaphi ivuselela ama-pancreas. Umphumela wokuphuza imbewu:
ukulungiswa kwengcindezi yegazi,
khulisa imisebenzi yokuvikela yomzimba,
ukwenza kusebenze izinqubo zokugaya ukudla,
ukukhuthaza ukukhula kwamaseli nokuvuselelwa kabusha.
Ukusetshenziswa njalo kwembewu yesinaphi kuzothuthukisa isimo esivamile sesiguli futhi kulondoloze amazinga evamile kashukela.
Ukuze ulungiselele ukumnika, udinga i-2-3 tbsp. imbewu yefilakisi yomhlabathi. Kumele athululwe ngengilazi yamanzi bese eshiyelwa ukuyifaka ubusuku bonke. Ekuseni, umuthi kufanele ubiliswe bese uphola kancane. Isiphuzo esiphelile sihlungwa ngesihlungo. Lokhu kuyadingeka ukuze uqede umphunga kanye ne-oyela.
Ukumnika kufanele kudakwe phakathi nesikhathi sips ezincane. Sonke lesi sikhathi kufanele abe ku-thermos. Ngokuhambisana nosuku okudingeka uphuze ngalo okungenani amalitha ayi-1.5 wamanzi ahlanzekile.
Ngesikhathi sonyaka, ama-blueberries anconyelwa ukuba adliwe amasha. Inani elifanelekile le-100 g ngosuku. Amacembe ama-Blueberry angasetshenziswa ukwenza itiye noma i-decoction. Zingalungiswa ebusika. Amajikijolo kufanele omiswe noma aqandiswe iqhwa.
Ama-Blueberries asiza ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi, amazinga kashukela aphansi futhi aqede ukuqubuka kwesifo sikashukela.
Ukulungisa ubungako beshukela egazini, kunconywa ukuthatha ukumiliselwa okusekelwe kuma-lilac buds. Kufanele ziqoqwe esiteji sokuvuvukala. Ngezinkomishi ezi-2 zamanzi abilayo, kunconywa ukuthatha ama-2 tbsp. izinso. Umuthi kumele uthele amahora ama-6. Lesi yisimo sansuku zonke, okufanele sidakwe izikhathi ezi-3-4.
Ngaphambi kokusebenzisa amakhambi abantu, kufanele uthintane nochwepheshe futhi uqiniseke ukuthi akukho okuphikisana. Udokotela unquma umthamo ophelele kanye nesikhathi sokwelashwa. Ukusebenza kwezokwelapha kuhlolwa ngemiphumela yokuhlaziya.
Izinto zokwenziwa kule sayithi zingezokuqondisa kuphela futhi ngeke zisetshenziswe njengesiqondisi esiqondile esenzweni ngaphandle kokubonisana nodokotela okuphoqelekile.
Mayelana nezinzuzo nezingozi zomkhiqizo
Isinaphi sisitshalo saminyaka yonke imbewu yaso yasemhlabathini esetshenziswa njengesithako esidumile emhlabeni wonke. Abanye ochwepheshe bathi inhlamvu yesinaphi iyinhle kakhulu kangangokuba isifo sikashukela sigwenywa kangcono, kepha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kungaba yingozi kuphela uma uhlukunyezwa.
I-mustard isetshenziswa njengomthombo wamavithamini we-B, A, E, no-D, amaminerali afana ne-zinc, i-potassium, i-calcium, i-magnesium, i-phosphorus, namanye ama-macro nama-micronutrients amaningi.Ngaphezu kwalokho, imbewu ngokwedlulele iqukethe ama-omega-3 fatty acids awusizo lomzimba, anomthelela omuhle ohlelweni lwezinhliziyo kanye nohlelo oluphambili lwezinzwa, ithuthukisa isimo sesikhumba, izinwele, izipikili. Imbewu yesinaphi ivimbela ukukhula kwamaseli womdlavuza, ivimbela ukukhula komdlavuza kwizifo sikashukela, futhi ibe nemiphumela yokulwa nokuvuvukala, i-analgesic ne-tonic.
Ukusetshenziswa kwesinaphi sikashukela kuyasiza:
Thuthukisa ukugaya kanye nesifiso sokudla.
Shesha imetabolism yakho.
Shintsha umfutho wegazi.
Gqugquzela ukukhula kwamaseli nokuvuselelwa kabusha.
Khulisa izivikelo zomzimba.
Ngenxa yenkomba yayo ephansi ye-glycemic, imbewu yesinaphi isiza amazinga aphansi kashukela, okubaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela. Kepha ukuze impahla enenzuzo yesitshalo izibonakalise, ukuthambisa kumele kusetshenziswe ngamanani alinganiselayo futhi kucatshangelwe ukwephulwa.
Kwenqatshelwe ukusebenzisa imbewu uma kunomlando wezifo ezilandelayo:
Isifo sofuba samaphaphu.
I-gastritis, isilonda sesisu, i-enterocolitis.
I-Pyelonephritis yefomu elibi noma elingamahlalakhona.
Izifo ezibucayi zesistimu yenhliziyo.
Kwesinye isikhathi kuba khona ukungabekezeleleki kwe-mustard powder, okusongela ukubonakala kokungezwani komzimba (i-urticaria, ukuvuvukala kolwelwesi lwe-mucous lamehlo, ukuvuvukala kolimi, izindebe nomphimbo). Ku-diabetes, imiphumela engathandeki nayo ingavela lapho kudliwa lwesinaphi ngokweqile okujwayelekile. I-overdose yezinongo isongela ngesiyezi, ukuphefumula, i-bradycardia enzima, kuze kufike ekulahlekelweni yimizwa.
Umkhiqizo akufanele usetshenziswe uma umuntu enesifo sofuba samaphaphu
Kunoma ikuphi, ngaphambi kokwelashwa nge-mustard, kuyadingeka ukubonana nodokotela oyi-endocrinologist, ikakhulukazi lesi seluleko sisebenza ngohlobo 2 sikashukela. Uhlobo 2 sikashukela i-mellitus (engathembekile kwe-insulin) lubonakala ngokuqedwa okungaphelele kokukhiqizwa kwe-insulin ngumzimba, ngakho-ke ungakwazi ukwehlisa kalula izinga likashukela esimeni esibucayi.
Umbono wabalandeli bomuthi ohlukile
Abalandeli bomuthi obuhlukile kudala baziwa ngokuthambisa izinongo. Kunezinketho ezahlukene zokusetshenziswa kwayo, imbewu ingadliwa ngendlela yayo emsulwa, futhi ihlanganiswe nezakhiwo ezizuzayo zamakhambi noma eminye imikhiqizo yokudla, izinongo zesinaphi zikulungele kahle ukwelashwa kwesifo sikashukela i-mellitus.
Imvamisa ukuthatha isipuni sembewu yesinaphi kathathu ngosuku. Ukuze isebenze kahle, igezwa phansi nge-anyanisi tincture. I-infusion ilungiswa ngokushesha futhi kalula: u-anyanisi ophakathi nendawo kufanele asikwe futhi uthele ama-200 ml wamanzi apholile, ulinde amahora amabili, bese uxubha uketshezi. Ukusetshenziswa njalo kwembewu yesinaphi yesifo sikashukela ngemuva kwamasonto amabili kuthuthukisa kakhulu isimo sikashukela, kulawula ushukela wegazi futhi kusiza ukulahlekelwa ngamakhilogremu angeziwe.
Itiye le-mustard elwa no-sikashukela lithandwa kakhulu. Ukuyilungiselela, kufanele uphule isipuni esisodwa sesinaphi, imbewu ye-chicory kanye nopelepele wamanzi 500 ml wamanzi abilisiwe.
Ungasebenzisa amanye amakhambi okwelapha asebenza ngokufana:
Itiye lakhiwa kabusha ku-thermos isikhathi esingaba ihora nesigamu, bese likhanywa ukuphuza ama-200 ml, ekuseni nakusihlwa, imizuzu engama-30 ngemuva kokudla.
Kubalulekile ukuthi izinongo ezisetshenzisiwe zintsha. Kunconywa ukuthenga imbewu yesinaphi emakhemisi, ngenkathi kucatshangelwa usuku lokuphelelwa yisimo kanye nemibandela yesitoreji esifanele. Ukuze ungahlangani nokuba khona kwenani elikhulu lezinto ezilondoloziwe kanye nabazinza, okucebile ngemikhiqizo yesitolo, kungcono ukuthenga lwesinaphi esomile.
Ngakho-ke, kukho konke lokhu okungenhla, singenza isiphetho esingenakuphikiswa - Imbewu yesinaphi yesifo sikashukela akuyona nje kuphela ukunambitheka okumnandi emikhiqizweni esemqoka, kodwa futhi ne-prophylactic esebenzayo yezinkinga ze-endocrine. Ungathathi i-mustard njengokuthambisa okulula, futhi iyoba ngumsizi othembekile ekulweni nalesi sifo!
Enye yezindlela ezijwayelekile zokusebenzisa lwesinaphi yilena elandelayo: phakathi nenyanga zonke izinsuku, kathathu, kufanele uthathe isipuni esisodwa sedessi yembewu yesinaphi. Lokhu kuzoba usizo kakhulu kumuntu ngamunye kwabanesifo sikashukela.
Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwesinaphi kanye namanye amakhambi nezitshalo, kanye nembewu yazo, kufanele kubhekwe njengokusebenza ngempumelelo okuthe xaxa.
Isibonelo, ngesifo sikashukela i-mellitus yohlobo lokuqala nolwesibili, kuzosiza kakhulu ukusebenzisa umkhiqizo wokunciphisa amaqabunga amakhambi ababayo. Kuvunyelwe ukuthatha izithako ezinjengalezi:
yarrow nabanye abaningi.
Kuyinto efiselekayo ukuyisebenzisa ngamanani amancane. Kunoma ikuphi, leli nani akufanele libe ngaphezu kwezipuni ezintathu ngosuku.
Itiye elenziwa ngamakhambi abuhlungu kufanele libhekwe njengekhambi eliphumelelayo elilinganayo lesifo sikashukela sohlobo lokuqala nolwesibili. Ukuze uyilungiselele, sebenzisa inani elincane lamakhambi anjenge lwesinaphi, imbewu ye-chicory, upelepele wamanzi. Ngemuva kwalokho zibekwa kuma-thermos, ngaphezu kwalokho zisebenzisa uhhafu welitha elishisayo - okungenani ama-70-80 degrees - amanzi. Itiye kufanele lifakwe okungenani ihora elilodwa nesigamu bese liphuza nengilazi yengxenye yehora ngemuva kokudla.
Yini ehlukile nge-mustard?
Uma kwenzeka isifo sikashukela i-mellitus sohlobo lokuqala nolwesibili, ukuze kuvuse umsebenzi wamanyikwe, ukudla kufanele kuhambisane nokusetshenziswa kwezitshalo ezibabayo, ikakhulu lwesinaphi.
Lokhu, kusobala, yisinongo esinjalo esenza ukuthi sikwazi ukunika okwangempela esitsheni esingenakunambitheka kakhulu. Inani elincane lwesinaphi, elizengezelelwa endishini yokudla, lizowenza ube munambitheke futhi ujuluke. Isinaphi se-mustard sizosiza ekuhlobiseni ukunambitheka kwenyama ephekiwe, futhi amaqabunga amadala abe ukunambitha okungafaniyo nesaladi yemifino.
Akukalulekanga ukuthi usebenzise le nkathi nganoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela ngobukhulu obukhulu, okufanayo kuyasebenza kubantu abanempilo. Kubalulekile ukunaka ukuthi imbewu noma ezinye izingxenye zesitshalo ziyasetshenziswa.
Uma kwenzeka ulahlekelwe amandla ku-mellitus yesifo sikashukela, imbewu ecishe ibe ngu-20-30 kufanele igezwe ngamanzi. Sebenzisa lokhu kwakhiwa:
izinsuku ezingama-20 noma ngaphezulu.
Kubalulekile ukuthi okusanhlamvu kube yisitshalo esisha.
Ukuze uthole amakhanda amakhulu uma unesifo sikashukela, kunconywa ukusebenzisa amathisipuni amathathu wengxubevange yesinaphi.
Ngaphezu kwalokho, kuyathandeka ukuwaxuba namanzi ku-slurry obukhulu bese ugcizelela imizuzu emihlanu. Ngemuva kokulungiselela, kuzodingeka ukunamathisela engxenyeni encane yezicubu kusuka emuva kuya kwisisekelo segebheji imizuzu emihlanu.
Endabeni yekhala elinamandla lesifo sikashukela, kunconywa ukugcoba kancane nsuku zonke, kepha ungafafazi uwoyela wesinaphi eduze kwakhala noma amathempeli. Ngokusebenzisa njalo, lesi sifo sizodlula. Ngakho-ke, i-mustard ingenye yezindlela eziphumelela kakhulu ezisetshenziselwa uhlaka lwemithi yendabuko. Ngakho-ke, ngamunye wabanesifo sikashukela kufanele asebenzise izindlela zokupheka ngakho.
Yini enhle isinaphi
Lesi sitshalo sinezakhiwo ezihlukile, ngenxa yezinto eziningi ezizuzisayo ezikhona ekubumbeni okusanhlamvu, okungukuthi:
uwoyela onamafutha ayigugu, angatholwa ngokucindezela okubandayo (i-omega-3 fatty acids),
amavithamini A, B6, D, E, K no-PP,
i-folic ne-nicotinic acid,
imvelo yemvelo elwa namagciwane
Izinzuzo zesinaphi zesifo sikashukela
Ngesifo sohlobo lwesibili lokusanhlamvu, izitshalo ziwusizo kakhulu. Izici eziphambili zokuphilisa zesitshalo, okufanele abanake abanesifo sikashukela zifake:
imiphumela yokubulala amagciwane, i-antifungal kanye ne-anti-inflammatory,
Ukwehla ushukela wegazi,
ukugqugquzela kokukhiqizwa kwejusi yesisu kanye nomphumela omuhle enqubweni yokugaya ukudla,
amandla okudambisa izinhlungu
umphumela omuhle emsebenzini wohlelo lwezinhliziyo, amalunga nobuchopho,
ukukhuphuka kwe-hemoglobin ngenxa ye-chlorophyll, okuyingxenye
amandla okuphembelela kahle izinga lokuncipha kwesisindo,
ukuhlinzeka ngomphumela omnene we-laxative,
umphumela onenzuzo esikhunjeni (umphumela wokuhlanza njengengxenye yama-okhilimu namafutha okugcoba) kanye nokukhululeka kwezilonda ezivame ukutholakala ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Ungasisebenzisa kanjani isinaphi ngempumelelo nangokuphepha
Indlela elula futhi ejwayelekile yokusebenzisa imbewu yesinaphi ukuyidla kathathu ngosuku ngethisipuni. Ungenza umkhiqizo ube nempilo ngokwengeziwe ngokungeza inani elincane lamanye amakhambi kuwo. I-dandelion, umhlonyane, i-yarrow, i-grey jaundice nezinye izitshalo ezinomunyu omunambitha obabayo (amakhambi kufanele ashintshwe) kufanelekile. Inani eliphelele lomuthi onjalo odliwe phakathi nosuku akufanele lidlule ivolumu elilingana nezipuni ezi-3.
Indlela yesibili edumile esetshenziswa ngabanesifo sikashukela uma kungenzeka ilahlekelwe amandla nobuthakathaka ukuthatha ukumiliselwa kwembewu entsha (okusanhlamvu okungu-20-30), okuhlanzwa ngamanzi amancane imizuzu emi-5. IGruel kusuka okusanhlamvu okuvuvukayo idliwa nsuku zonke amaviki amathathu noma ngaphezulu (uma kunesidingo).
Itiye elenziwa ngamakhambi abuhlungu libhekwa njengomkhiqizo osebenza kahle kakhulu. Ukuyilungiselela, udinga isipuni senhlanganisela yamakhambi (i-chicory, i-pepper yamanzi, isinaphi nabanye), abekwe ku-thermos futhi athulule amalitha amanzi ayi-0,5 emazingeni okushisa angama-70 - 80 ° C. Isiphuzo kufanele sifakwe okungenani ihora elilodwa nesigamu bese sithathwa engxenyeni yengilazi imizuzu engama-30 ngemuva kokudla.
Awukwazi ukusebenzisa okusanhlamvu kuphela, kepha namaqabunga amasha wesitshalo. Bayakwazi ukunika noma yisiphi isidlo ukuthinta okubabayo nephunga elingajwayelekile. Kwisobho sokudla, ungangeza zombili izikhwebu nezingxenye eziluhlaza zesinaphi. Amaqabunga ahlanganisiwe azosiza isaladi yemifino, nesoso se-gravy sizokwengeza ukunambitheka enyameni ebilisiwe ebilisiwe. Ngokwemvelo, ungazibandakanyi ekusebenziseni izinongo, zombili kwabanesifo sikashukela nabantu abaphilile.
Ikhekhe yesinaphi ilungele nokudla, okungashintshwa ngekhekhe kusuka ezitshalweni ezibabayo zemithi ezibaliwe ngenhla. Emini, ungasebenzisa i-1 - 3 wezipuni womkhiqizo.
Mhlawumbe ithuluzi elingathandeki kakhulu, kepha elisebenzayo liyingxube yembewu yesinaphi nge-anyanisi ukumnika. Ukulungiselela lokhu okugcina, kuyadina ukunquma u-anyanisi bese uwathela engilazini yamanzi abandayo ahlanzekile. Ngemuva kwamahora amabili, ukumnika sekumi ngomumo, futhi kungahlanganiswa nembewu entsha yesinaphi. Ngemuva kokwelashwa ngomuthi onjalo, kunconywa ukunikela ngegazi ngoshukela.
Imbewu yesinaphi yesifo sikashukela iyindlela engabizi futhi efanele yokulwa nalesi sifo. Ungesabi ukudla isinaphi ngamanani amancane, ngoba awumnandi nje kuphela, kodwa futhi unempilo. Into esemqoka ekusetshenzisweni lwesinaphi nezimali okusekelwe kuyo ukulandela izincomo zokulungiselela nemithamo.